Fanolorana ny fanesoana amin'ny famolavolana bilaogy vaovao | Avy amin'ny Linux
Androany aho dia niasa tamin'ny famolavolana bilaogy vaovao, zavatra iray efa Nanome hevitra azy ireo aho tamin'ny taon-dasa ary efa ananako ny fanesoana voalohany, izay tsy mitovy amin'ny teo aloha izay nasehoko anao.
Ho an'ny pejy voalohany dia hanana zavatra mitovy amin'izany isika:
Ary ho an'ireo lahatsoratra zavatra mitovy amin'izany:
Amin'ity tranga farany ity dia mbola tsy mazava amiko raha esorinay ireo lahatsoratra Recommended izay tampoka tampoka tampoka, zavatra tsy maintsy horesahintsika izany, indrindra ny hitazomana ny fitoviana amin'ny endrika.
Amin'izao fotoana izao, noho ny fahateren'ny fotoana, tsy afaka manome anao antsipiriany bebe kokoa aho, fa misy kosa ny soso-kevitra rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fanolorana ny fanesoana amin'ny famolavolana bilaogy vaovao
Arahabaina ity tsara 😀
Oops, azafady fa nanandrana rohy aho haneho hevitra, ary ratsy tarehy izany raha ilay hevitra, raha azo esorina 😀
"Ratsy tarehy io"
Ny tiako holazaina dia ny lesoka niseho tamin'ny fanehoan-kevitra, heveriko fa ny rohy sy ny gentoo dia tsy nifanandrify tamin'ny fet_math an'ny plugin fanehoan-kevitra, saingy hafahafa satria nampiseho ireo logo ¿?.
"Raha azo foanana io"
Ny tiako holazaina dia hoe ao amin'ny kinova vaovao na hafa dia afaka mamafa ny hevitsika isika, toy ny ao amin'ny bilaogera ohatra, hevitra izany.
arahabaina indray 🙂
Tsy tiako na inona na inona ……… .. hahaha Mananihany aho. Ny fanesoana dia tsara, tsy andriko ny hahitana azy amin'ny tena izy. Heveriko fa ireo lahatsoratra natolotra dia maka toerana kely eo ambony rehefa mamaky lahatsoratra, na dia fantatro aza fa tsy inona akory fa ny fikororohana, fa andinindininy fotsiny izany.
Marina fa maka toerana kely izy ireo, saingy indraindray misy lahatsoratra tena tsara izay manadino ary izany no fomba iray hampahatsiarovan'izy ireo azy .. Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra.
Ny tiako holazaina dia rehefa mamaky ilay lahatsoratra, toy izao. Azo antoka fa tokony tazomin'izy ireo izany, saingy eo ampovoan'ny famakiana dia somary manelingelina ihany. Tsy miteny zavatra hafa aho hehe.
Marina izany, fa raha esorintsika ny tapany ambony dia tapaka ny endriny ... Ho hitako izay noforoniko 😀
Manaiky ny hevitr'i Blaire Pascal aho, mieritreritra aho fa ampy ny mamela ireo lahatsoratra natolotra tamin'ny pejy lehibe, na dia fantatro aza fa hanome asa bebe kokoa ho azy ireo izany. Zavatra iray hafa, tsy hitako ireo fanehoan-kevitra na aiza na aiza; Mila manindry rohy fanampiny ve isika raha te hiditra amin'izy ireo? Ho an'ny ambiny, heveriko fa tena tsara ny zavatra nataon'izy ireo ...
Raha ny marina dia tsy handao izany isika, hametraka zavatra hafa amin'ny toerany ary mazava ho azy amin'ny faritra kely kokoa ..
Mahafinaritra ny lohahevitra, milay izany, miarahaba ny web_dev ...
Toa endrika tsara be izany amiko. Manantena aho fa hanana izany amin'ny Internet atsy ho atsy.
Mahafinaritra !. Izao hiandry hankafizany.
Pink-linux dia hoy izy:
Heveriko fa tanjona lehibe ity famolavolana ity !! Tsy hitako hoe ilaina ny manova azy .. rehefa mandeha ny raikipohy dia tsy misy dikany ny fanovana azy .. maro ny tranonkala Internet no nitahiry izany faran'ny hatsarana izany tamiko nandritra ny taona maro ary mbola misy ..
AZA MANOVA NY DESIGN .. azonao atao ny manandrana manaparitaka antsipiriany kely na, tsy manova ny Blog, na milalao loko vaovao ihany koa, hanomezana feo vaovao kokoa .. fa ity famolavolana ity dia vokatry ny fahombiazan'ity bilaogy ity. .
Fantatrao fa tiako izany fa efa nametraka ilay tranonkala niova fo aho mba hahafahako manondro azy ao amin'ny Twitter ... Izany sy izay nolazainao tamiko momba ny zavatra tsy mitombina mba hamonjy ahy amin'ny Internet couta lol.
Na dia manizingizina foana aza aho fa tsara raha toa ny fanehoan-kevitray koa maneho ny tontolo manodidina ny birao ampiasainay. 😀
Fa ny fiovana dia tena tsara ary toa madio tsara.
Heveriko fa tsy mety izany…
Mitovy amin'ny bilaogy iray hafa izay tonga namangy visitar aho
Nah, lainga !!
Tiako izany, andao hojerentsika rehefa tanterahin'izy ireo izany 😀
Samy tsara izy roa 🙂
Toy ny hevitra sy fomba tsara foana amin'ny fanesoana! Enga anie ka izay rehetra azo ovaina ho kaody. Ny tena tiako indrindra dia ny endrika vaovao hampisehoana ny sary famantarana ny distro sy ny faritra misy ny lohateny rehefa mamaky lahatsoratra.
Famolavolana tena tsara toy ny mahazatra, mangataka aho fa ny "Lahatsoratra atoro" dia TIPS efa vita.
Tsara be ry zareo !!!!
Ny zavatra iray tsy hitako dia ny biraom-pifidianana. Horoahin'izy ireo ve izy ireo?
Ary zavatra iray hafa (somary mahasosotra aho anio) ao amin'ny kinova finday dia miseho indroa miantoana ny fandatsaham-bato ary tsara kokoa raha indray mandeha monja izy ireo no tonga haingana kokoa.
Izany rehetra izany no fitsikerana ahy, ny ambiny dia dera sy arahaba madio
Ahhhh, eny. Tiako ihany koa ny fitsapan-kevitra tsy ampoizina, tiako ny fanontaniana mandritra ny herinandro, toy ny siansa xataka, fa miaraka amin'ny fitsapan-kevitra momba ny zavatra mitranga. Ohatra, "Ahoana ny hevitrao momba ny vokatra KDE 4.10?" na zavatra mitovy amin'izany.
Tsy nanelingelina fa tezitra satria te-hanorisory !! Manamboatra tranokala koa aho ary misavoritaka foana. Saingy tsy inona akory fa ny fanekena.
Aza manahy fa hisy fanadihadiana iray na tsia hiseho amin'ny kinova finday 😉
Tiako ilay famolavolana, na dia mieritreritra aza aho fa ny bara mainty an'ny Start, Forum, WebIRC, sns. Dia ho mahasosotra tokoa rehefa mamaky amin'ny efijery kely, toy ny netbook na takelaka iray, raha tsy miafina ilay bara rehefa mihodina. Ny ambiny, mahafatifaty sy kanto tokoa ^^
Eny, miafina ny bara, tsy hijanona ho raikitra toy ny ankehitriny intsony izy.
Wow, vanin-tsofa mahafinaritra izany. Hialanao ve ny widget Facebook f * cking izay manaloka ny tranonkala (Design Responsive) amin'ny efijery kely toa ahy? (320 × 480, 3.2 santimetatra).
Tsy fantatro fa ny Widget dia nanidy ny Responsive .. mora ny mamaha 😛
Salama ho an'ireo mpamaky sy mpiasan'ny tranonkala rehetra.
Vaovao eto amin'ny manodidina ahy aho ary tiako ny arahaba anao noho ny asa lehibe ataonao amin'ny bilaogy.
Te-hametraka fanontaniana fohy aho, azo alaina ao amin'ny tranonkalanao ve ny lohahevitra ampiasainao?
Heveriko fa raha misy tranokala ao amin'ny GNU / Linux sy Open Source ary satria ny atiny dia manana lisansa CC (BY-NC-SA) dia azo atao ny misintona an'io lohahevitra io.
Raha izany no izy, azonao atao ve ny milaza amiko hoe aiza no azo sintonina?
Miarahaba anao, tsy misy ny lohahevitra amin'izao fotoana izao, indrindra satria mbola misy bibikely izay amboarintsika. Vantany vao apetrakao ny lohahevitra vaovao dia hamita ny fanamboarana ity hitanao izao izahay ary ho azon'ny rehetra ..
Tena tsara ho an'ny valiny elav.
Vaovao mahafinaritra izany satria ny famolavolana tranonkala dia toa tena tsara, mazava ary mahafinaritra ny maso.
Miarahaba, ary misaotra betsaka.
Tena tsara. Heveriko fa ilay "atolotra" dia mety hiditra eo ambanin'ny "Fampiroboroboana", noho izany dia tsy mandray toerana betsaka izy ireo
Mmm hevitra tsara .. 🙂
Heveriko fa tsara…
Tiako ilay volavola volavola. Raha ny tenako manokana dia tsy tiako fotsiny ny hoe tsy ampidirin'ny lahatsoratra ny lahatsoratra atoro anao etsy ambony, fa tiako hanjavona koa io sidebar io. Fa kosa, aleoko mahita sombin-mofo eo an-tampon'ny lahatsoratra, antsipirian'ny mpanoratra sy lahatsoratra mifandraika etsy ambany, fanehoan-kevitra etsy ambany, fe-potoana.
Amin'ity fomba ity, ny habaka dia azo ampiasaina tsara kokoa ho antsika miaraka amin'ny efijery 16: 9 19 santimetatra na mihoatra (ny bootstrap dia manana modely matanjaka izay mety hahasoa azy io), ary heveriko fa hahasoa ihany koa ho an'ireo mizaha finday fitaovana, satria mety ho vitsy ny zavatra hoentina. Na izany na tsy izany, ho ahy dia tsy misy dikany firy ny mamerina ny sisin-dàlana sy ilay lahatsoratra natolotra ho an'ireo fomba fijery roa, dia ampy ny fananana azy ireo amin'ny hevi-dehibe.
Na izany na tsy izany, sosokevitra fotsiny izy io mifototra amin'ny zavatra tiako ho hita. 😉
Misaotra ny soso-kevitra Hugo, ho raisinay izany. Raha ny marina dia tiako foana ireo bilaogy manafoana ny sidebar ao amin'ny lahatsoratr'izy ireo, saingy tsy fantatro hoe hatraiza no mety ho tsara na ratsy ho an'ny mpampiasa izany. Efa eo an-dàlana koa ny Mofomamy B
Mazava ho azy fa ny famafana ny sisin-dàlana dia misy lafy ambany, saingy mety afindrafindrao ireo widget tena ilaina (toy ilay fidirana) any an-kafa.
Tsy haiko raha, ankoatry ny voalaza etsy ambony, dia hahazo kaody html izay manamarina ianao. Ny iray amin'izao dia misy lesoka 45 ...
Fantatro sahady fa lafiny iray izay tsy manome lanja ny mpitsidika izany raha tsy mahita fomba fijery mahatsiravina momba ilay pejy izy ireo, soa ihany fa tsy izany no izy.
Miarahaba anao amin'ny asa mafy ataonao, Elav!
Fantatro tsara fa mafy ny asan'ny "mangina" (famerenana) bilaogy.
Misaotra betsaka Pablo. Izaho dia mbola miasa amin'ny antsipirian'ny fanitsiana sy ny olana momba ny fidirana amin'ny ekipa fampandrosoana 😀
Fanontana laser nomerika dia hoy izy:
Miarahaba tsara ny bilaogy aho, minimalist io. tena tsara.
Mamaly ny fanontana amin'ny laser nomerika
Lahatsoratra tena tsara Elav !!!
Nahazo fanesoana maimaim-poana aho tamin'ny http://myfpschool.com/los-mejores-mockups-para-descargar/
Fantatrao ve ny toerana ahafahako mahazo bebe kokoa? Ho an'ny asan'ny oniversite io.
Ny tena ataoko dia ny mijery fironana vaovao, endrika vitsivitsy ary mahazo aingam-panahy. Tsy nampiharina mihitsy io resahina io.
OpenOffice mipoitra indray toy ny phoenix